Wararkii ugu dambeeyay dagaal dhimasho & dhaawac geystay oo ka dhacay Hiiraan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaal dhimasho & dhaawac geystay oo ka dhacay Hiiraan
Wararkii ugu dambeeyay dagaal dhimasho & dhaawac geystay oo ka dhacay Hiiraan
Hiiraan (Halqaran.com) – Dagaalka geystay khasaaro kala duwan ayaa Kooxda la Magac baxday Macawiisleey iyo Xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ku dhexmaray deegaan duleedka ka ah degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan lagu Magacaabo Waab-weyn halkaas oo meel u dhow ay ku sugan yihiin kooxda Macawiisleey, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo sacad ku dhow socday.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen saddex ruux halka qof kale uu ku dhaawacmay.
Guddoomiyaha Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in ay gacan siin doonaan kooxda Macawiisleey ee dagaalka kula jira mintidiinta Ururka Al-Shabaab.
Si kastaba, wararkii ugu dambeeyey ee hadda naga soo gaaraya deegaanka lagu dagaallamay ayaa waxay sheegayaan, in xaaladu ay tahay mid degan, hayeeshee dadka deegaanka ay sheegeen inay cabsi dareemayaan.
Dagaal dhimasho iyo dhaawac geystay
iyo al shabaab